Rampage: United Free Fire ရဲ့အထင်ကရလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ Rampage အစီစဉ်ပြန်သယ်ဆောင်လာပါပြီ၊ ဒီနှစ်မှာ4ကြိမ်မြှောက်ကစားသမားတွေသူတို့ Rampage ဝိညာဉ်နှင့်တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ရမှာပါ! သွားပါ
ဗုံးအဖွဲ့ 5V5 ဗုံးအဖွဲ့သည်အဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအတွေ့ကြုံနှင့်ပြန်လာမည်! ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပုံအသစ်: အယ်လ်ပက်စတီလိုမှာဆုံမည်! သွားပါ
FFWS 2022 SENTOSA်Free Fire ၏အမွှန်းတင်ဖို့အကောင်းဆုံးအော့လိုင်းပြိုင်ပွဲ၊ Free Fire World Series (FFWS)၊ မေတွင်ပြန်လာမည်! သွားပါ
အပ်ဒိတ်အသစ်လာပါပြီ! လာမည့်မွမ်းမံမှုတွင်, LINK စနစ်မှာ အခမဲ့ဇာတ်ကောင်ရယူပါ, ပိုကောင်းတဲ့ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်, နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းတွင်းမစ်ရှင်များ. ဘာရှိသေးလဲ? ဤအကြိမ်တွင်ပိုသေးတဲ့ဂိမ်းဖိုင်ဆိုဒ် (~400MB) ခံစားကြည့်လိုက်ပါ! သွားပါ
Free Fire သည် Battle Royale အပစ်ခတ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဂိမ်းတစ်ပွဲစီတိုင်းသည် ကစားသူ ၅၀ကိုကျွန်းတစ်ခုတွင်ထားရှိပြီး၊ ကျယ်ပြောသောမြေပုံကိုစူးစမ်းနိုင်မည်၊ တောရိုင်းမှာပုန်းခြင်း သို့ရန်သူကစားသမားရှာဖွေချေမှုန်းပြီး ကျွန်းတွင်နောက်ဆုံးရှင်သန်သူဖြစ်ရမည်။ Battle Royale အပြင်၊ အခြားဂိမ်းစနစ်များလည်း Free Fire မှာရနိုင်ပါတယ်။ 4v4 နည်းလမ်းကတော့ဂိမ်းနည်းလမ်းများထဲမှမြှင့်တက်လာတဲ့ထင်ပေါ်တဲ့ဂိမ်းပါ။ ဂိမ်းပုံစံကတော့ ကစားသူ4ယောက်ပါတဲ့ အသင်း2သင်းနေရာအသေးလေး ကြိမ်ရေများသောတိုက်ပွဲမှာယှဉ်ပြိုင်ပြီး အရည်သွေးပြည့်ဝတဲ့အသင်းကိုတွေ့နိုင်မှာပါ။ အခြားနည်းလမ်းကတော့ရမ်ဘယ်နည်းလမ်းပါ၊ လူမှုရေးကျကျဂိမ်းဖြစ်ပြီးကစားသူတွေရဲ့ဇဝနဥာဏ်သုံးကစားရတဲ့ဂိမ်းမျိုးပါ။
Bomb Squad 5V5 Animation - Full Version
EP34 - Willful Wonder
Homer သည်မျက်မမြင်လူသတ်သူဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးသွားသူထက်အခြားအရာပေါ်အာရုံပိုရသူဖြစ်သည်.
အရှေ့မှအနီးဆုံးရန်သူသို့ဒရုန်းလွှတ်သည်, ရန်သူ၏ရွေ့လျားအလျင်နှင့်ပစ်ခတ်နှုန်းကိုလျှော့ချပြီး ၎င်းတို့ကိုပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည့်5မီတာအချင်းရှိသွေးခုန်နှုန်းပေါက်ကွဲမှုကိုဖန်တီးသည်.
အသုံးပြုထားသောအိုက်စ်ဝေါများသည် ပျက်စီးမှုပြုလုပ်သည့်အခါ 1s တိုင်းတွင်တိကျသောလက်ရှိကြာရှည်ခံမှုကို ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အိုက်စ်ဝေါတွင် ARs ကိုအသုံးပြုသောအခါပျက်စီးမှုတိုးလာသည်။
ကယ်တင်ရေး (ကူညီခြင်း) အလျင်တိုးမြှင့်
3.5m အကျယ်ကုသရေးဇုန်ဖန်တီးပါ။ အထဲတွင်ကစားသူနှင့်မဟာမိတ် 3HP/s ပြန်တက်နိုင်သည်။ လဲကျခဲ့သော်၊ ကစားသူနှင့်မဟာမိတ်သည် ကိုယ်တိုင်ကုပြီးပြန်ထနိုင်သည်။
အကွာအဝေးနှင့်လိုက်ပြီး ပျက်စီးမှုမြင့်တက်မည်. ပစ်မှတ်ရန်သူသို့ပျက်စီးမှုမြှင့်တက်မည်.
80 HP ယာယီရမည်, အိုက်စ်ဝေါနှင့်ဒိုင်းကာသို့ ပျက်စီးမှုတိုးမြှင့်မည်. 10s ထိသုံးနိုင်မည်
ကစားသူသည် ၈၀ မီတာအတွင်းရန်သူပစ်ခံထိပါက, တိုက်ခိုက်သူကို 6s မြင်နိုင်မည် (ကစားသူသာမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်) သိသာထင်ရှားတဲ့ရန်သူများကိုပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်အပိုဆောင်းသံချပ်ကာထိုးဖောက်မှုရှိပါတယ်။